Impilo Yokuzingela Nokuqoqa
Kunzima ukusho lapho iziChwe (noma ama-San) ekhula njengamasiko ahlukene - abanye bathi sekude iminyaka eyizinkulungwane ezingamashumi amane noma eyizinkulungwane ezingamashumi amathathu edlule, lapho isikhathi eside esomile sihlukanisa abantu engxenyeni eseningizimu-entshonalanga yezwekazi kunezinhlanga ezasenyakatho.
Kunoma yikuphi, iziChwe zasebenzisa futhi zahlanza ubuchwepheshe besikhathi samatshe kamuva, obuhlanganisa ubukhali nezihloko, eziningi zazo ezazihlanganiswe ekwakhiweni kokhuni ukuze zenze imikhonto noma imimese.
IziChwe zaphinde zakha isakhiwo sezenhlalakahle esasizungeze impilo yabo yendabuko yokuzingela nokuqoqa. Njengomthetho, kwakungamadoda awenza ukuzingela, kuyilapho abesifazane beqoqa izithelo, amajikijolo nezinye izitshalo. Ukuqonda kwabo kwemvelo kwabona la maqembu omndeni amancane ehambahamba emhlabeni ngokuvumelana nezilwane kanye nezinkathi zonyaka.
Ngokwenkolo, iziChwe zajabulela imibono eyinkimbinkimbi ehlanganisa umhlaba wemvelo nombuso ongokomoya. Lokhu kuboniswa imidwebo yabo eminingi edwaleni, okuvame ukufanekisa ukusina kokwemuka ingqondo. E-Richtersveld, noma kunjalo, akukho midwebo yomhhume.
Esikhundleni salokho, sithola ukubazwa emadwaleni - ukuqoshwa okwenziwe ngokusika ngaphakathi kwamadwala ngenduku enenhloko ebukhali noma ngesando yedwala. Lemidwebo ibonisa izihloko ezihlukahlukene, kusukela emaphethini wesifundo esiphathelene nobukhulu bezinto nokumelana kwazo kuya ukubonakaliswa okungokoqobo kwezilwane, njengedube ne-mpofu.
Ukutadisha kwale midwebo yezilwane ezifuywayo kusaqala futhi, ngokudabukisayo, izindawo eziningi ziye zalimazwa yizimayini kanye/noma izivakashi ezingenandaba. Ukufinyelela okuningi kulamasayithi manje kuvinjelwe ukuvimbela umonakalo owengeziwe.
Inombolo yeziChwe ezahlala eNamaqualand naseRichtersveld beyiphansi. Lokhu kwakunjalo, ngoba indawo ewomile enemithombo yamanzi embalwa nje enokwethenjelwa. Ugu lwaluyisiphakamiso esingcono kakhulu, kodwa-ke, futhi kunezindawo eziningi zokuvubukula ezibonisa ukuxhumana okuphawulekayo phakathi kweziChwe kanye nezinsiza zasolwandle njengemvu yamanzi kanye nenhlanzi ezinamagobolondo.
Lezi zizwe ezisogwini ziye zabizwa ngokuthi 'ama-strandlopers' (abahamba ngezinyawo ogwini) nobufakazi bokuhlala kwabo kutholakala ezindaweni ezihlukahlukene ngasogwini lwaseNamaqualand futhi, ikakhulukazi, eningizimu ye-Afrika.